I-china i-XYS yasimahla uthuli lweselfowuni esomileyo esomileyo (Uqoqosho) abenzi nabathengisi | Xieyanshi
I-XYS yasimahla uthuli oluSelfowuni oluSoma (Uqoqosho)
Inkqubo inokusebenza ngokuguqukayo kwindawo yokusebenza. Inkqubo yesixhobo sonke ijolise kwindawo yokucoca uthuli-eyamkela uphawu oludumileyo lwaseYurophu. Unokubeka izixhobo kwinto yokucoca, efana nesandpaper, iisanders kunye nezinye izinto.
I-XYS yasimahla Uthuli lweselfowuni eyomileyo Grinder (esemgangathweni)
I-1.Streamline, uyilo lobungcali, intshukumo egudileyo ngexesha lokusebenza, ekulungele ngakumbi ukuyisebenzisa
Imoto ye-2.Imported vacuum yobungcali, ezinzileyo kunye neyomeleleyo iyunithi ekhuselekileyo ye-3.control, imeko yokusebenza inokuboniswa kwiscreen, kwaye ukusebenza kuzinzile.
4. Ilungele uthuli lweklasi L
Isakhono sokukhupha esomeleleyo kunye nongcoliseko oluncinci lothuli
Isiko lokusila lwamanzi emveli vS Uthuli olukhululekileyo lokugaya
I-1 Isiko lokusila lamanzi lemveli lenza ukuba iipeyinti zinxibelelane namanzi ixesha elide, ngakumbi emantla, kwaye zisebenze nzima ebusika.lt ayihambelani nempilo kabani, kodwa ikwanokusebenza nzima, kulula ukudinwa kwaye kubangele izifo ezisemsebenzini
2.Manual esila owomileyo kubangela ingozi enkulu uthuli.
3.Kuba indawo yokusila yamanzi ikwinkqubo yokwakha, yenziwa ngephepha lokusila amanzi xa i-putty ingomile, kwaye yonke inkqubo ifuna uncedo lwamanzi. Ukuba ayiphathwanga kakuhle, kulula ukuba nexolo leorenji, amaqamza omoya kunye nezinye iingxaki kwaye zibangele ukuphinda zisebenze, ezokonakalisa umdla wenkampani.
4.amanzi okusila ashiya ngokulula amanqaku esandpaper, kwaye ngokulula abangele ukuba umzimba wecarcar uruse.
Inkqubo ivumela abasebenzi ababini ukuba basebenze ngaxeshanye.
Inokuxhotyiswa ngombane osebenza ngokusila kunye nomoya osebenza kumazibuko okusila, iisanti ezahlukeneyo zomoya / zombane onokukhetha kuzo.
Ubukhulu becala kusetyenziswa iworkshop yentsimbi kunye nepeyinti yokususa ipeyinti, iintsiba zokuqala zokugaya.
Egqithileyo Isixhobo seSanding se70mmx400mm Pad seHook kunye neLoop Disc
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu woomatshini bokucoca ulwelo lomoya